Banijya News | सेयर बजारमा लगानीकर्ताले गुमाउँदै, कुन कम्पनीले बढी गुमाए त बजारमा ? - Banijya News सेयर बजारमा लगानीकर्ताले गुमाउँदै, कुन कम्पनीले बढी गुमाए त बजारमा ? - Banijya News
सेयर बजारमा लगानीकर्ताले गुमाउँदै, कुन कम्पनीले बढी गुमाए त बजारमा ?
२६ असार, काठमाडौं । शेयर बजार यो साता समग्रमा घटेको छ । साताको पहिलो दिनदेखि नै घटेको बजार हिजो अन्तिम दिन विहीवार मात्र आएर करेक्शन भएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार आइतबार ८.४८ अंक, सोमबार ११.७८ अंक, मंगलबार ५.२४ अंक र बुधबार १६ं९७ अंकले घटेको बजार साताको अन्तिम दिन विहीबार २३.७६ अंकले उतार चढाव आएको हो । सो साता नेप्से परिसूचक २८२४.८९ अंकमा आएर रोकिएको छ ।
असारको तेस्रो साता सेयर बजार समग्रमा घटेर बन्द भयो । सातामा भएका पाँच कारोबार मध्ये अन्तिम दिन बिहीबार दोहोरो अंकले बजार बढेर बन्द हुनको पछि कर र किस्ता तिर्नुनै मुख्य कारण देखिन्छ । यही २५ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले सूचना जारी गरेको थियो । यसरी कर तिर्नका लागि लगानीकर्ताहरुले पैसा जोहो गरिसकेका थिए । यसपटक कोभिड प्रभावका कारण धेरै उद्यमीव्यवसायी तथा ठूला लगानीकर्ताले सेयर बजारको कमाईबाटै पैसा जोहो गरेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरुले नाफा बुक गरेका कारण पनि बजार सुस्त हुन गएको अनुमान छ । यस्तै, बैंकको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि पनि धेरैले रकम जोहो गरिसकेको अवस्था छ ।
यसको अलावा संस्थागत लगानीकर्ता, म्युचुअल फन्डलगायतले पनि चालु आर्थिक वर्षको नाफा देखाउन भाउ बढेको बेला सेयर बिक्री गरेका थिए । अब उनीहरुले नाफा देखाइसकेका र फेरि सस्तो मूल्यमा किन्ने भएकाले समग्रमा बजारमा सेयरको माग क्रमशः बढ्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसले पनि बजार घटेको थियो । तर एकाएक बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छ । बिहीबार बजार बढेको हो । बजार बढेपछि बाँकी चार दिन घटेका कारण सातामा नेप्से परिसूचक २७ दशमलव २४ अंकले घटेको छ ।
अघिल्लो २ हजार ८ सय ५२ दशमलव २४ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक २ हजार ८ सय २५ दशमलव १० अंकमा झरेको छ । सातामा सबैभन्दा धेरै आकर्षण उत्पादनमूलक समूहमा देखिएको छ । या समूहको सबइन्डेक्स सबैभन्दा धेरै ४३१ अंक अर्थात ७ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ । यसबाहेक पनि व्यापार, बैंकिङ र म्युचुअल फण्ड पनि बढेका छन् । व्यापार समूहको सवइन्डेक् ४२ अंकले बढेको छ भने बैंकिङ समूह ४ अंकले बढेको छ ।
उता घट्नेहरुको शिर्ष स्थानमा भने हाइड्रोपावर क्षेत्र देखिएको छ । हाइड्रो सातामा ५ दशमलव २८ प्रतिशतले घटेको छ । घट्ने दोस्रोमा फाइनान्स समूह ३.४२ प्रतिशत र तेस्रोमा लगानी समूह २.२२ प्रतिशत रहेको छ । सातामा सबैभन्दा धेरै कारोबार हुनेमा हिमालय डिस्टीलरी लिमिटेडको सेयर देखिएको छ । बिहीबार प्रतिकित्ता ६३ रुपैयाँले बढेर यस कम्पनीको सेयर मूल्य ५ हजार ५ सय २५ रुपैयाँमा बन्द भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा दोस्रो नम्बरमा माथिल्लो तामाकोशी देखिएको छ ।
सातामा सबैभन्दा धेरै सेयर मूल्य घट्ने पहिलो नम्बरमा माथिल्ले तामाकोशी देखिएको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य एक सातामै १०४ रुपैयाँले घटेको छ । जुन १२ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । यहीँ सातामात्रै तामाकोशी आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । धेरै घट्नेको दोस्रो नम्बरमा भने नेको इन्स्यारेन्स देखिएको छ । सातामा सबैभन्दा धेरै सेयर मूल्य बढ्नेमा सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था पहिलो नम्बरमा देखिएको छ । यस कम्पनीको सेयर मूल्य मसबैभन्दा धेरै ८ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।